Hoggaamiyaha Jabhadda ONLF Oo Jigjiga Sibalaadhan Loogu Soo Dhaweeyey | Berberatoday.com
Hoggaamiyaha Jabhadda ONLF Oo Jigjiga Sibalaadhan Loogu Soo Dhaweeyey
December 3, 2018 - Written by Berbera Today
Jigjiga(Berberatoday.com)-Boqolaal qof oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ayaa soo dhaweeyay wafdi uu hor-kacayo hoggaamiyaha guud ee Jabhada ONLF Admiral Maxamed Cumar Cismaan.
Dhamaan jidadka muhiimka ah ee magaalada Jigjiga ayaa lagu xardhay calanka dowlad deegaanka Soomaalida, sidoo kalana dadka ayaa sitay calaamado muujinayay sida ay ugu faraxsan yihiin dib ugu soo laabashada magaalada hoggaanka sare Jabhada ONLF.
Hoggaamiyaha Jabhada Admiral Maxamed Cumar Cismaan ayaa sheegay in halganka ay ku jiraan uu soo bilaawday sida uu hadalka u dhigay wakhtigii Axmed Gurey, islamarkaana uu sii socon doono ilaa laga gaadhayo hadafka laga leeyahay oo ah gobanimo iyo caddaalad waa sida uu hadalka u dhiggay.
Dib ugu soo laabashada Itoobiya madaxda sare ee ONLF ayaa timid kaddib markii heshiis ay kala saxeexdeen Ururka iyo dowladda Itoobiya oo lagu soo gabagabeeynayay halgankii hubeysnaa ee mudadda dheer ay ku soo jirtay Jabhada.
Dhowaan ayaa boqolaal ciidamada jabhada ONLF waxa ay soo gaadheen magaalada Jigjiga kadib markii uu ururka ONLF ahaa mid dagaal ku dhufo ka dhaqaaq ah kula jirey dowlada Itoobiya.